Mbido AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Ndị na-egwu egwuregwu bọọlụ Spanish Hector Bellerin Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
LB na-egosi Full Story of a Football Star kasị mara aha na aha njirimara; “Nta Anwansi”. Ụdị anyị nke Hector Bellerin Biography na Akụkọ nwata na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site n'oge ọ bụ nwata ruo n'oge.
Nyocha nke Arsenal Right-Back na-agụnye akụkọ ndụ ya tupu ama aha ya, ndụ mmekọrịta ya, ndụ ezinụlọ ya na ọtụtụ ihe na-emeghị ka ọ mara banyere ya.
Ee, onye ọ bụla maara banyere ikike ya ọsọ ọsọ mana mana ole na ole na-atụle akwụkwọ akụkọ Hector Bellerin nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a na-enweghị adieu ọzọ, ka anyị bido.
Akụkọ Hector Bellerin nke Childhoodmụaka - Ndụ Mmalite na Ezinụlọ:
Héctor Bellerín Moruno mụrụ na 19th ụbọchị nke March 1995 na Barcelona, ​​Spain. Ọ bụ Pisces kwadoro site na ọmụmụ. A mụrụ Hector nye Mr na Oriakụ Maty Moruno abụọ, ndị Spen. Nne na nna ya bụkwa ụmụ amaala Catalonia.
Héctor malitere ụbọchị ịgba egwu ya n'ime ụlọ ọrụ ndị ntorobịa nke Barcelona malite na nwata nke 6. Enye ama ada 8 isua ke ukpepn̄kpọ ukpepn̄kpọ Barcelona emi enye akanamde ke mbon n̄kan̄ emi enye mîkọfiọkke.
Ọbụna mgbe ọ bụ nwatakịrị, Héctor gosipụtara ọsọ ọsọ ya na ụdị egwuregwu ọ na-awakpo n'oge ọ nọ na Barcelona.
Ọtụtụ oge, a họpụtara ya 'Onye na-eme egwuregwu' na tournaments. Ọkwá ya dị elu na 2008 Canillas international championship na Madrid ebe e nyere ya nwoke nke asọmpi award nke Zinedine Zidane zitere.
Kwa FC Barcelona onye hụrụ Bellerín n'anya. Ha na-enweta ọṅụ na-ele ya ka ọ na-agbaso ọsọ ọsọ ya n'inwe ndị na-akwado ndị mmegide yana ịkwaga ngwa ngwa n'achọ nchebe. Onye otu nwoke, Arsene Wenger, jidere ọṅụ ha.
dị nnọọ ka Cesc Fabregas, Bellerin mgbe ọ dị mkpụmkpụ nke 16 bụ Arsene Wenger kpụrụ ya na North London. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Emmanuel Eboue Childhood Story Plus Na-emeghe Eziokwu Akụkọ
Ọnye na-bụ Shree Patel? Hector Bellerin kacha hụrụ n'anya:
Ndụ Hector Bellerin na n'ọgbọ egwuregwu ewerela mgbanwe na-adọrọ mmasị kemgbe ọ bịarutere England. Ọ nọwo na mmekọrịta ogologo oge na ọmarịcha ihe nlereanya Shree Patel.
Mma nke ntutu isi ojii bi na London ma nwee mgbọrọgwụ India. Emebere ya maka ụdị Calvin Klein na akara egwuregwu Ellesse ma nwee ihe karịrị puku mmadụ iri abụọ na-eso ụzọ na akaụntụ Instagram ya nke akpọrọ 'iamshree'.
Shree bụ naanị onye nyeere Hector aka ịlụso owu ọmụma ọgụ mgbe ọ rutere London dị ka nwata nwoke dị afọ 16.
N'ịmalite mmekọrịta naanị mgbe otu ọnwa gachara, Hector enweghị mmetụta kpamkpam na ọ bụ naanị ya na obodo a London.
Ma ịhụnanya abụọ ahụ na-enwe mmasị ịkekọrịta foto nke onwe ha niile hụrụ n'anya. Ekekọrịta foto dị n'okpuru ebe enwere ike mgbe emechara ya.
Imefu oge dị mma n'akụkụ oké osimiri bụ eziokwu, ọ dị ezigbo mma ma ndị hụrụ ya n'anya na-ekerịta. Ndị na-egwu egwu agaghị eju ha anya ma ọ bụrụ na ha kwupụta alụmdi na nwunye ha n'oge ọ bụla.
Eziokwu Akụkọ Hector Bellerin - Egwuregwu Egwuregwu CoD:
Dịka nwata nwoke dị afọ 16 na-akwaga mba ọzọ, Bellerín hụrụ ndụ n'England n'ihe ịma aka n'oge kachasị mma. Enyemaka dị ya mkpa iji merie nsogbu asụsụ na usoro ọzụzụ ọzụzụ siri ike nke agụmakwụkwọ Arsenal.
Ndụ ya siri ezigbo ike na enweghị ọtụtụ ihe ha nwere ike ime na naanị oge ya iji dọpụ uche ha na aha ya.
E wezụga ịhapụ oge ya na enyi nwanyị ya nọrọ, Hector na-etinye ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ oge ya niile na-akpọ Oku nke Ọrụ na PlayStation 4.
O doro anya, mgbe ọ na-adịghị adọ aka nri na Emirates, ọ na-agbanye aka na bọtịnụ nke PlayStation console ya. N'okpuru ebe a bụ mkparịta ụka ya na oku nke Ọrụ Ọrụ.
Ọ bụ ndị otu egwuregwu U18 ya butere ya na Oku nke Ọrụ, yana afọ ise gbadara n'ahịrị ya na egwuregwu vidiyo onye na-agba ụta nke mbụ na-ewu ewu.
Bellerín na-ekwu na n'ime afọ abụọ mbụ ka ọ malitechara egwuregwu ahụ, ọ ga-egwu ya ogologo ụbọchị dum mgbe ọzụzụ gasịrị.
N'ajụjụ ọnụ nke Sun, Bellerín kwuru ihe ndị a. “Ọ bụụrụ m nrụgide nrụgide. Anaghị m enweta oge dị ukwuu igwu egwu, n'ihi ya, mgbe mụ na di m ma ọ bụ nwunye m nọ, m na-egwu nanị CoD. ”
Ụdị onye ọzọ:
Na - agbanyeghị igwu egwu Cod ma soro enyi ya nwanyị nọrọ oge, Hector nwere mmasị ile usoro ihe nkiri TV na nkịta ya nke na - elebara anya na fim niile.
Hector na nkịta ya gosipụtara nlebara anya na fim.
Hector Bellerin Biography - Ọ dị ngwa karịa Theo Walcott:
Kemgbe ọ rutere n'ụgbọala ahụ na 2006, Theo Walcott abụwo onye kachasị ọsọ na North London. Na mbido oge nke afọ 2014–15, ọ gbajiri Theo WalcottIhe ndekọ 40-Arsenal gbachapụrụ agbacha site na 1/100 nke nke abụọ.
Theo WalcottIhe ndekọ dị na 40 mita bụ 4.78 sekọnd mana Spaniard tinyere nke ahụ na oge 4.77 laghachi na 2015. Agbanyeghị, akụkọ na-egosi ugbu a na Bellerín kpụchaala oge ahụ ruo na 4.42 dị egwu.
N'ezie, onye na-agbachitere Arsenal nwere ngwa ngwa ọ pụrụ ọbụna ịmalite "Ugboro atọ-atọ" goldalist gold Usain Bolt, onye kpochiri na 4.64 sekọnd iji kpuchie 40-mita mbụ mgbe ọ setịpụrụ ihe ndekọ ụwa maka 100-mita sprint.
Site n'Ịntanet na-achọpụta, ma Bellerín na Bolt ọbụna na-ekpori ndụ ọchị site n'igbu ibe ha aka Twitter. Obi abụọ adịghị ya, a na-ele Hector anya dịka otu n'ime ndị na-agba ụkwụ ọsọ ọsọ n'ụwa.
Hector Bellerin Bio - Ikpe Ikpe na-ezighi ezi:
N'oge oyi nke 2013, Arsene Wenger zitere nwa 18 dị afọ iri na ụma gbaziri agbaziri na Watford. N'oge ahụ, Spaniard mere naanị ngosi 8 na ọtụtụ ndị na-akwado Arsenal enweghị ike ịghọta ihe kpatara ya.
Dị ka o doro anya na nwatakịrị ahụ agaghị enweta minit ọ chọrọ, Wenger chetara ya mgbe naanị ọnwa abụọ gasịrị.
Afọ ole na ole mgbe nke ahụ gasịrị, onyeisi ndị Watford Troy Deeney nyere anyị nghọta ihe mere ndị gụsịrị akwụkwọ na La Masia ji kpọọ egwuregwu ole na ole na Vicarage Road.
O kpughere na onye njikwa ahụ n'oge ahụ, bụ Giuseppe Sannino, hụrụ na onye Spen na-adị oke oke ọkụ na nke na-agaghị agbachitere ya maka akụkụ ya.
Hector Bellerin Bio - Ntughari:
Ọsọ ọsọ ya na mgbaji obi ụtọ nwere ike inye ya. Mana tupu oge ya na London, Hector Bellerín bụ onye na-agba mbọ na Barcelona. Ọ bụ naanị mgbe ọ bịarutere North London nke gbanwere gbanwee.
Ọ bụ Wenger onwe ya onye mere oku ikpeazu ka o mee ya ka o buru aka nri ka o bu.
Onye French ahụ ji aka ya nye onye osote onye nchịkwa Steve Bould ka ya na onye na-eto eto nwee nnọkọ n'otu oge iji nyere aka mee ka mgbanwe ya gaa na nchebe. Bould ga-akụziri ya otu esi agbachitere na ọkọ.
Taa, Bellerín dị ugbu a dị ka otu n'ime ndị ntorobịa kachasị mma na ọ bụghị naanị Premier League mana bọọlụ ụwa.
Eziokwu Hector Bellerin - Akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ:
Na 2016, Hector debanyere aha na ntanetị na Mahadum Pennsylvania, ụlọ akwụkwọ ndị isi na Philadelphia.
Bellerin na-agbaso diplọma na ahia, ma na-ele okwu nkuzi na ntanetị ma mezue ule na weebụsaịtị nke ụlọ akwụkwọ.
N'oge na-adịbeghị anya, nwa ọhụrụ ahụ kwetara na ọ na-achọta ihe dị ala na-achọsi ike, ma ọ bụ akụkụ ahụ nke kachasị amasị ya.
Hector Bellerin Biography - Tdị Eziokwu:
A maara Hector Bellerin maka ọsọ ya na-agba ọsọ na akara ma o nwekwara ọhụụ maka ọdịdị ahụ ya.
Na-agba ọsọ Spanish nwere aka zuru ezu na-agbada aka nri ya nke na-agụnye ihe oyiyi nke Virgin Mary na-egosi ogologo oge ya.
Hector kwuru ozugbo, sị: "Enwere m onye mbụ m, rosary, nne m ochie na-azụkarị m, ma o doro anya na enweghị m ike igwu egwu ha n'ihi na ị pụghị iyi uwe ọ bụla. "
N'ihi ya, ekpebiri m igbu ya. Echere m na m nọ gburugburu 15 ma ọ bụ 16 mgbe m mere ya, nke ahụ bụ nke mbụ m.
Hector nwekwara egbu egbu nke nduru na akara ezinụlọ. Onye ibu 'Ezinụlọ' na-anọchi anya nwa nwanne nne ya, nwa nne ya, nwanne m nwanyị, mama m na papa m na nna nna m na ndị fọdụrụ na ezinụlọ Bellerin. Maka Hector, ihe niile gbasara ezinụlọ m.
Ndụ Hector Bellerin:
Héctor Bellerín Moruno sitere na ezinụlọ nke Catalan n'etiti ezinụlọ. Ndị mụrụ ya, nke a maara dị ka Maty Moruno bụ ndị Catalan. Ha nyefere nwa ha nwoke na FC Barcelona mgbe ọ dị obere nke 6. Ebe ọ bụ na akwụ ụgwọ ego football.
Bellerin zụtara ụlọ ọhụrụ na London, ebe a na-atụ anya na ndị mụrụ ya ga-ebi. Ha bi na London dị nso na Hector.
Na nso nso a, Ọ zụtara ụlọ ọzọ na Barcelona. Nke a bịara n'etiti nkwupụta banyere ọpụpụ Arsenal.
Hector Bellerin Ndụ nkeonwe na mpụga bọọlụ:
Hector Bellerin kwadoro Pisces ma nwee àgwà ndị a na àgwà ya;
Ike nke Hector Bellerin: Obi ọmịiko, nkà, ọgụgụ isi, dị nwayọọ, maara ihe, egwu.
Adịghị ike Hector Bellerin: Egwu, ịtụkwasị ntụkwasị obi obi, mwute, ọchịchọ ịhapụ eziokwu, nwere ike ịbụ onye a mara ma ọ bụ onye nwụrụ anwụ.
Ihe Hector Bellerin nwere mmasị: Ịnọ naanị, ụra, egwu, mmekọrịta ịhụnanya, mgbasa ozi a na-ahụ anya, igwu mmiri na isiokwu ime mmụọ.
Ihe Hector Bellerin achọghị: Mara ihe niile, na a na-akatọ gị, oge gara aga na-alọghachi na ịkwa obi nke ụdị ọ bụla.
Anụ ọhịa kachasị amasị Hector Bellerin: O kwuru na anụ ọhịa ya kachasị amasị ya bụ na ọ na-amasị ya "Agụụ". Site na nke pụtara, nke a pụtara na onye Spania nwere agụụ dị mkpa maka ihe ịga nke ọma.
Daalụ maka ịgụ Hector Bellerin's Childhood Akụkọ tinyere akụkọ eziokwu ndị dị oke ọnụ. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị ele anya n’isiokwu a, biko tinye okwu gị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị!